Yintoni irhafu yabakhenkethi kwaye isetyenziswa phi eYurophu? | Iindaba Zokuhamba
Ngexesha lenyanga kaJulayi, iBarcelona yavuma irhafu entsha yabakhenkethi, eyakongezwa kwezi sele zisetyenzisiwe kumaziko ehotele nakwindawo zokuhamba ngenqanawa. Nokuba kungenxa yemizamo yebhunga lesixeko ukukhusela iSixeko saseCondal ekuxinaneni kwabakhenkethi okanye ngenxa yomnqweno wokuqokelela imali, inyani kukuba bazama ukwamkela amanyathelo okhenketho olunoxanduva, kanye njengoko urhulumente wengingqi waseVenice eza lawula ukufikelela eSt.
Kodwa oko kubizwa ngokuba yirhafu yabakhenkethi kubachaphazela njani abakhenkethi? Xa sihlawulela ikhefu lethu sinokuzifumana kwi-invoice yokugqibela ngexabiso eliphezulu ngenxa yeli nqanaba. Ungaphoswa yindawo elandelayo apho siza kuthetha khona malunga nerhafu yabakhenkethi, kutheni isebenza kwaye zeziphi iindawo ezibandakanya oko.
I-Barcelona okanye iVenice ayisiyiyo kuphela iidolophu zaseYurophu ezisebenzisa irhafu yabakhenkethi. Kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela sele zifakiwe, ezinje ngeBrussels, iRoma, iBalearic Islands, iParis okanye iLisbon.
1 Yintoni irhafu yabakhenkethi?
2 Kutheni le nto kufuneka sihlawule irhafu yabakhenkethi?
3 Iinkcukacha zabakhenkethi ngokweenkcukacha
3.1 Irhafu yomoya
3.2 Imirhumo ngokuhlala
3.3 Iirhafu zabakhenkethi eYurophu
Yintoni irhafu yabakhenkethi?
Irhafu ekufuneka ihlawulwe ngumhambi ngamnye xa etyelele ilizwe okanye isixeko esithile. Le rhafu ihlala ihlawuliswa xa ubhukisha itikiti lenqwelomoya okanye kwindawo yokuhlala, nangona zikho ezinye iifomula.
Kutheni le nto kufuneka sihlawule irhafu yabakhenkethi?
Amabhunga ezixeko kunye noorhulumente basebenzisa irhafu yabakhenkethi ukuze babenengxowa-mali emiselwe amanyathelo okuphucula iziseko zokhenketho kunye nemisebenzi, uphuhliso kunye nolondolozo. Ngamanye amagama, ulondolozo lwelifa lemveli, imisebenzi yokubuyisela, uzinzo, njl. Ngamafutshane, irhafu yabakhenkethi yirhafu ekufuneka iguqulwe ngokuqinisekileyo kwisixeko esi tyelelwayo.
Iinkcukacha zabakhenkethi ngokweenkcukacha
Xa ubhukisha inqwelomoya, inqwelo moya iyasihlawulisa uthotho lwemirhumo yokugubungela ukhuseleko neendleko zepetroli. Zihlala zifakiwe kwixabiso lokugqibela letikiti kunye nerhafu yokusetyenziswa kwezixhobo zesikhululo seenqwelomoya kunye nokuhamba komoya.
Kwelinye icala, kukho enye irhafu esetyenziselwa abahambi abashiya ilizwe. Ziyaziwa njengemirhumo yokuphuma kwaye zisetyenziswa kumazwe afana neMexico, Thailand okanye Costa Rica.
Le rhafu yabakhenkethi ihlawuliswa ukuhlala kwiihotele nakwindawo yokuhlala yabakhenkethi (kubandakanywa namakhaya okusetyenziselwa iholide) kwaye yahlulwa ngaphakathi kwityala lehotele okanye ihlawuliswa ngokwahlukeneyo, nangona kunjalo ixhomekeke kwiVAT (izinga elincitshisiweyo le-10%). Iindawo zabakhenkethi ziyayiqokelela kwaye emva koko bayilungise ngekota nganye kunye nearhente ehambelana nayo yerhafu.
E-Spain, uluntu ngalunye oluzimeleyo lunommiselo walo malunga nerhafu yezokhenketho, kodwa ziyahambelana ekwabeni ingqokelela kwingxowa mali yokhenketho oluzinzileyo.e evumela ukukhuselwa, ukugcinwa kunye nokunyuselwa kwempahla yabakhenkethi kunye nezixhobo eziyimfuneko ukuze zisetyenziswe. Ngamafutshane, zisetyenziselwa ukunika ingxelo kunye nokunyusa icandelo.
Iirhafu zabakhenkethi eYurophu
E-Spain okwangoku kuhlawulwa irhafu yabakhenkethi eCatalonia nakwiiBalearic Islands. Kuluntu lokuqala, lusetyenziswa kwiihotele, izindlu, izindlu zasemaphandleni, iinkampu kunye nohambo lokuhamba ngenqanawa. Ixabiso liyahluka phakathi kwe-0,46 kunye ne-2,25 euro ngomntu ngamnye ngosuku kuxhomekeke kwindawo yokusekwa kunye nodidi lwayo.
Kuluntu lwesibini, irhafu yabakhenkethi isebenza kwiinqanawa zokuhamba, iihotele, iihostele kunye neendawo zabakhenkethi. Irhafu inexabiso eliphakathi kwe-0,25 kunye ne-2 euro ngomtyeleli ngamnye nasebusuku ngokuxhomekeke kudidi lwendawo yokuhlala. Ngexesha eliphantsi isantya sincitshisiwe, kunye nokuhlala ixesha elide kuneentsuku ezisibhozo.
Ngaphezulu kwesiqingatha samazwe aseYurophu asebenzise irhafu yabakhenkethi ukukhuthaza icandelo. Ezinye zazo zezi zilandelayo:
IRoma: Kwihotele ezi-4 neye-5 zeenkwenkwezi uhlawula i-euro ezi-3 ngelixa kwezinye iindidi uhlawula ii-euro ezimbini ngomntu nobusuku. Abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-2 akufuneki bahlawule le mali.
EMilan naseFlorence: Irhafu yabakhenkethi ye-1 euro ngomntu nobusuku busetyenziselwa inkwenkwezi nganye enehotele.
IVenice: Inani lerhafu yabakhenkethi liyahluka ngokuxhomekeka kwixesha lonyaka, indawo ekuyo ihotele kunye nodidi lwayo. Ngexesha eliphezulu i-1 euro ngobusuku kwaye kubizwa inkwenkwezi kwisiqithi saseVenice.
Irhafu yabakhenkethi eFrance isebenza kulo lonke ilizwe kwaye iyahluka phakathi kwe-0,20 kunye ne-4,40 euro ngokuxhomekeke kudidi lwehotele okanye ixabiso lamagumbi. Umzekelo, i-2% eyongezelelweyo ihlawuliswa ukuhlala kwexabiso elingaphezulu kwama-euro angama-200.
Irhafu yabakhenkethi eBelgium ixhomekeke kwidolophu kunye nodidi lokusekwa. EBrussels iphezulu kunakwilizwe liphela kwaye iphakathi kwe-2,15 euro yehotele yeenkwenkwezi ezi-1 kunye nee-euro ezingama-8 kwiihotele ezinenkwenkwezi ezi-5, kwigumbi ngalinye nangobusuku bonke.
Kwikomkhulu, i-Lisbon, irhafu yabakhenkethi yi-euro enye kumhambi ngamnye ohlala kuyo nayiphi na ihotele okanye iziko. Isebenza kuphela kwiveki yokuqala yokuhlala esixekweni. Abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-1 abayihlawuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Yintoni irhafu yabakhenkethi kwaye isetyenziswa phi eYurophu?
Iilwandle ezintlanu ezicocekileyo eSpain zokuhlamba